Joe Biden oo farriin u diray shacabka Mareykanka - Tilmaan Media
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii ku boorriyay dadweynaha Mareykanka inay dhabarka dhuuqsadaan oo ay u midoobaan dagaalka lagula jiro Aafada Coronavirus, isagoo sheegay in Mareykanka uusan dagaalka ku guuldarreysan doonin.
Biden oo ku sugan magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ayaa hadalkan jeediyay maalin ka hor Ciidda isu mahadcelinta ee Thanksgiving-ka oo ku began Khamiista maanta ah, waxuuna ballan qaaday inay jirto rajo dhab ah oo ku xiran in dhibaatada aysan waligeed sii jiri doonin.
Waxuu sheegay in Tallaalkii ugu horreeyay ee lagula dagaallamayo Coronavirus la heli doono dhamaadka bisha December xilligaas oo guud ahaan dadka sida ugu dhaqsiyaha badan loo tallaali doono.
Hadlka Biden ayaa kusoo beegmaya iyadoo milaayiin dadka ah ay safarro ugu jiraan Ciidda Thanksgiving-ka xillia si xooggan ay u kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID19 iyo kuwa isbitaallada lagu daweynayo ee gudaha Mareykanka oo gaartay heerkii ugu sarreeyay.
Dadka safraya ayaa ka dhagaha ka furaysanaya farriimaha digniinta joogtada ah ee loogu sheegayo inay guryahooda joogaan islamarkaana ay xaddidaan isu imaatinka Ciidda Thanksgiving-ka, taas oo sii kordhinaysa walaaca laga qabo laba kacleynta xowliga ku socota iyo dhimashada Covid19 ee inta lagu jiro xilliga ciidda ee bisha December.
Iyadoo dad badan ay safreeen Talaadii ayaa tirada dhimashada maalinlaha ah ee Covid19 uu sababay ay gaartay 2,000 oo ruux markii ugu horreysay tan iyo bishii May.
Sidoo kale Talaadadii ayaa isbitaallada la dhigay 87,000 oo ruux kuwaas oo uu soo ritay xanuunka waana tiradii ugu badneyd ee kiisas hal maalin ah intii uu cudurka soo billwoday.
Labadii todobaad ee lasoo dhaafay ayaa gudaha Mareykanka laga diiwaan galiyay 2.3 million oo xaaladood oo Coronavirus ah.
Hay’adda maareynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa ku boorrinaysa dadka inay guryahooda ku nagaadaan islamarkaana ay yareeyaan dabbaaldaggyadaooda Ciidda Thanksgivin-ka ee isu mahad celinta.
Shariif Sheekh Axmed oo maanta Baydhabo tagaya
Xaliima Aadan: ‘Diinteyda darteed ayaan uga haray “fashion-ka”
Ciidamada Maraykanka oo soo gaba gabeeyay ka bixitaankooda Soomaaliya
4 waxyaabood oo aan wanaagsanayn in la sameeyo cuntada kagadaal.
Ra’iisal Wasaare Rooble oo la kulmay madaxweynaha Hirshabeelle
Emmanuel Macron oo ka dalbaday Erdogan inay kulmaan
Go,aanada ugu horeeya uu qaadan Joe Biden
Beeralayda Gobolka Gedo oo ka cabanaya ayyax xaalufiyay
Qarax dhacay G/Shabeelada Hoose oo ay kudhinteen 6 askari
Museveni oo hogaaminaya codadka hordhaca ah ee kasoo baxay doorashada Uganda
Trump oo ka xir-xiranaya Aqalka Cad